Cómo usar Google Lens en အန်းဒရွိုက် y iPhone ကို / iPad
Entre Las applications များ más tecnológicas Que podemos utilizar en nuestro teléfono móvil, sin duda destaca la အသစ်က aplicación Google Lens, que permite aprovechar la inteligencia artificial အတွက် reconocer eficazmente မည်သည့် အမျိုးအစား de objetoeiniciar de inmediato una búsqueda sobre él, sin ရှိ que descifrar qué objeto tenemos. enmarcado နှင့် la cámara.
Sianosotros también nos fascinan las innovaciones tecnológicas y queremos ponerlas en práctica de inmediato, en esta guía te mostraremos Google Lens ကို Android နှင့် iPhone / iPad ပစ္စည်းများတွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း, အားဖြင့် lo que puede aprovechar de inmediato el poder de la inteligencia artificial de Google para reconocer objetos en el marco de la cámara o iniciar una búsqueda en ese objeto específico (incluso una búsqueda basada en compras en línea).
အဖတ်ကိုလည်း: ကင်မရာပေါ်ရှိစာသား၊ အရာများနှင့်နေရာများကိုအသိအမှတ်ပြုပါ
Google Lens အလုပ်လုပ်ပုံ
ဥပမာအားဖြင့်, ခွေးတစ်ကောင်ဘောင်အားဖြင့်၎င်း၏မျိုးဆက် (ကမှတ်မိ pedigree ရှိပါက) ကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အလားအလာအမှန်တကယ်န့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်y: podemos por ejemplo enmarcar un edificio o un monumento para ဖုံးကိုဓားရှည် cómo se llama o su historia, enmarcar un plato en el restaurante para averiguar el nombre y también ရယူ la lista de ingredientes o la receta con la que prepararlo, enmarcar un objeto que queremos comprar y averigua si existen ofertas Online o reconoce plantas, flores y el nombre de objetos comunes. En el momento de redactar este artículo, Google Lens solo está disponible conectando el dispositivoaInternet y ၎င်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ (como veremos más adelante).
Android မှာ Google Lens ကိုသုံးပါ
အခုဆိုရင် Google Lens ရဲ့အလားအလာကိုတွေ့ပြီ၊ အခမဲ့ app ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Android ဖုန်း (စမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ တက်ဘလက်ဖြစ်စေ) ကို install လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Google ကင်မရာGoogle Play Store မှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောတရားဝင်ဂူဂဲလ်ကင်မရာအက်ပ်။
Instalamos esta aplicación en nuestro móvil o tableta y accedemosalas လုပ်ငန်းဆောင်တာ de Google Lens abriendo la aplicación, desplazándonos hacia abajo hasta el menú အခြား နှင့်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ မှန်ဘီလူး။ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဘောင်ခတ်။ မှန်ဘီလူးရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်မှန်ဘီလူးဖြင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာ Android စမတ်ဖုန်းတွေ၊ တက်ဘလက်တွေအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့ပြcompatibilityနာကြောင့်မရနိုင်ဘူး (ထုတ်လုပ်သူကကွဲပြားတယ်); အကယ်၍ ကင်မရာအက်ပ်ကိုတပ်ဆင်။ မရပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်မှန်ဘီလူးကိုသုံးနိုင်သည် လက်ထောက် de voz de Googleဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်းရှိ Android ကိရိယာများအားလုံးတွင်ပေါင်းစည်းထားသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိဂူဂဲလ်မှန်ဘီလူးပုံလေးကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အမြင်အာရုံရှာဖွေမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Lens ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သောဓာတ်ပုံတွင်အသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်သည် (ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိလျှင်၎င်းကိုချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ backup လုပ်ထားသည် ဓါတ်ပုံများ gratuitaeilimitada), ကျွန်တော်စကင်ဖတ်ချင်သည့်ဓာတ်ပုံကိုဖွင့်ပြီးအောက်ခြေရှိ Google Lens အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။
iPhone / iPad ပေါ်မှာ Google Lens ကိုသုံးပါ
Google Lens ကို iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ Google, App Store မှာအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။
Una vez descargada la aplicación, iníciela, inicie sesión con nuestra အကောင့် de Google y, una vez en el buscador, presione el icono de Google Lens en la bar superioreinicie una búsqueda visual con la cámara trasera del iPhone o iPad.
တစ်နည်းအားဖြင့်, siempre podemos tomar la foto del objetoaescanear con la aplicación de cámara predeterminada del iPhone. Si elegimos este camino, lo único que tenemos que hacer es tomar la foto del objetoaidentificar o analizar, guardar la toma en la memoria interna del dispositivo, descargar la aplicación Google Photos, abrir la foto tomada hace un rato y presionar el ícono de Google Lens para iniciar la búsqueda visual.
La tecnología utilizada por Google Lens es muy avanzada, hasta el punto de que no existen rivales reales al momento de ရေးသား. No obstante, si queremos aprovechar la funcionalidad de búsqueda inversaapartir de las imágenes podemos utilizar un servicio gratuito como TinEyeတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌သုံးနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံ (သို့) အမည်မသိအရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်း (ချုံပုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုပင်) ကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းပြန်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မည်သည့်ရုပ်ပုံများကိုပုံ၏မည်သည့်ပုံပေါ်လာကြောင်းရှာဖွေနိုင်သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်နာမည် (သို့) သီးသန့်ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့မှသာသံသယဖြစ်စရာများကိုချက်ချင်းရှင်းလင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာရှာဖွေရေးလျှောက်လွှာတစ်ခုကိုရှာနေပါကထို application ကို download လုပ်နိုင်သည် Reverse: image search reverse, App Store မှာအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။
Similaracuando se ve para TinEye, esta aplicación le permite cargar fotos o imágenes de la memoria del dispositivoeinmediatamente iniciar una búsqueda inversa, para ရှာဖှေတှေ့ todos los detalles al respecto (pero solo si algo similar ya está presente en la Web) .
Google no deja de innovar y sorprenderasus usuarios: con Google Lens, de hecho, todos နိုင် aprovechar una tecnología muy avanzada (basada en inteligencia artificial) para reconocer cada objeto, monumento o cosa que se encuentra frenteanuestro teléfono inteligente. Con Google Lens tendremos un ojo electrónico verdaderamente inteligente siempreanuestra disposición, que nos ကူညီသည်áareconocereinformarnos sobre las cosas que desconocemos.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်မှန်ဘီလူးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များရှိဆိုဒ်များနှင့်လင့်များကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံမှရှာဖွေခြင်းဖြင့်အလားတူဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုရှာပါ mi အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်ဂူဂဲလ်အခြားနည်းလမ်းများ.